Mugabe hits Out Against Sanctions in Address to UN
Submitted by AA Zimbabwe on Sun, 2010-09-26 01:08
Mugabe hits Out Against Sanctions in Address to UN - International economic sanctions against Zimbabwe are illegal and have caused "untold suffering" for its people, President Robert Mugabe told the General Assembly today, calling for them to be scrapped immediately. [All Africa : Zimbabwe]
Electrification Agency Installs Solar Panels at Rural Clinic
Submitted by AA Zimbabwe on Wed, 2010-09-22 20:32
Electrification Agency Installs Solar Panels at Rural Clinic - The Rural Electrification Agency has installed state-of-the-art solar panels at Masera Clinic in Beitbridge, ending power problems that have affected the clinic for years. [All Africa : Zimbabwe]
Land Invaders Burn Down Farm
Submitted by AA Zimbabwe on Sat, 2010-09-18 02:34
Land Invaders Burn Down Farm - A farmer in Chegutu has become the latest victim of the continued onslaught against the commercial farming community, after her property was burned down by land invaders this week. [All Africa : Zimbabwe]
Prime Minister Says Indigenisation Not Expropriation
Prime Minister Says Indigenisation Not Expropriation - Zimbabwean Prime Minister Morgan Tsvangirai says a law to increase local black ownership of foreign firms would be implemented gradually and without forced sales. [All Africa : Zimbabwe]
Tsvangirai Pushes Zuma for Election in 2011
Tsvangirai Pushes Zuma for Election in 2011 - Prime Minister Morgan Tsvangirai has met Sadc mediator in Zimbabwe Jacob Zuma to push for the immediate implementation of the regional bloc's roadmap towards free and fair elections in the country next year. [All Africa : Zimbabwe]
Business Seeks Five-Year Election Freeze
Submitted by AA Zimbabwe on Sat, 2010-09-18 02:33
Business Seeks Five-Year Election Freeze - The Employers Confederation of Zimbabwe (Emcoz), a national grouping of private business leaders, has appealed to principals in the inclusive government to put a five-year moratorium on holding elections in order to consolidate economic recovery and maintain stability in the country, the Zimbabwe Independent has learnt. [All Africa : Zimbabwe]
Govt Snubs Africa-Europe Energy Indaba
Govt Snubs Africa-Europe Energy Indaba - Zimbabwe blew an opportunity to lure international energy investors when it snubbed the first high-ranking Africa-European Union Energy Partnership (AEEP) meeting in Vienna, Austria, this week. [All Africa : Zimbabwe]